ndi oru nlekota oru nchikota oru nyere ndi ahuike aka na ulo akwukwo di iche iche
Ọrụ nchịkọta ọnụ
Obi maka ịrụ ọrụ na ndị mmadụ
Ị mụtara ịkwado ndị na-elekọta ndị agadi, dị ka mgbe ị na-arịọ nri ma na-edebe ụlọ dị iche iche na ihe dị iche iche, mgbanwe na mgbakwasa akwa. Ị ga-amụtakwa otu esi eduzi ndị ọrụ na mmegharị ahụ na ị ga-amata alaka niile nke ngalaba ahụike.
Ị na-eme ka ọha mmadụ guzosie ike
Otu ọzụzụ Logistics co-mmeputa na-ewe na nkezi abụọ ruo afọ atọ.
Ị nwere ike ijikọ ọzụzụ ahụ na ọzụzụ ịzụlite.
Ị nwekwara ike gụọ ihe niile ị nwetagoro na agụmakwụkwọ mbụ (dịka nri nlekọta nri) dị ka ndị nwere ikike.
Enweghị ihe ọmụma ọhụụ tupu achọrọ ihe ọmụma. Ihe dị mkpa bụ agụụ maka iso ndị mmadụ rụọ ọrụ.
Dị ka ọrụ nchịkọta akụkọ, ị ga-enwe ike ịkwado nkwado maka ihe ndekọ logistical na ebe nchekwa dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ: mmezi, ọrụ nri, ụlọ na ebe dị ndụ echekwara, wdg.
Ị nwere ike ịmalite site na akwụkwọ a, mana ọzụzụ a bu n'uche iji kwado usoro ihe omume ahụ ejiji, Zorgkundige of Facilitator na Child.
Kedu ihe ọrụ ndị ọrụ lojik kwesịrị?
Ego ole ị na-arụ dị ka ọrụ na-arụ ọrụ na-adabere n'ụzọ siri ike n'ebe ọrụ gị ma ma ọ bụ na ọ na-arụ ọrụ na mgbanwe na / ma ọ bụ ọrụ izu ụka. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu ihe, kpọtụrụ onye ndụmọdụ anyị n'ọrụ maka ọzụzụ a.
Mgbe ịchọtara ọrụ nchịkwa gị nwere ike ịga n'ihu ọzụzụ ahụ ejiji, Zorgkundige of Facilitator na Child.
Ndị na-arụ ọrụ nchịkọta ihe na-arụ ọrụ oge niile
Ị na-arụ ọrụ mgbe ọzụzụ ndị ọrụ nchịkọta akụkọ n'okpuru nlekọta nke ndị ọrụ nlekọta. Ị na-akwado ndị nọọsụ na ndị nlekọta site n'ịrụ ọtụtụ ọrụ. Ị gaghị etinye aka na onye nlekọta. Ọzụzụ Ngwadogwu Wet bụ nkuzi nzọụkwụ site na nke ọzụzụ na-elekọta. N'ikpeazụ, ị nwere ike ịmalite ịmalite ọzụzụ Zorgkundige.
Maka ụmụ akwụkwọ nwere ahụmahụ, anyị na-arụ ọrụ na usoro mmemme. Ị ga-eru eru maka nke a ma ọ bụrụ na i jiriworị afọ anọ Nutrition-Care soro.
Ellen Smedts - Onye na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ